दुखद खबर : होली खेलेर नुहाउँन बाथरुम छिरेका नेविसंघका सभापति पदम भण्डारी मृ’त अवस्थामा भेटिए ! « Online Tv Nepal
दुखद खबर : होली खेलेर नुहाउँन बाथरुम छिरेका नेविसंघका सभापति पदम भण्डारी मृ’त अवस्थामा भेटिए !
Published :9March, 2020 6:51 pm
नेविसंघ डडेल्धुराका का’र्यवाहक सभापति पदम भण्डारीको नि’धन भएको छ। सोमबार होली खेलेर नु’हाउँन बाथरुम छि’रेका उनी मृ’त अवस्थामा भेटिएका हुन । उनी ग्यास ग्री’जर च’लाएर नुहाउन लागेको र मृ’त अवस्थामा भेटिएको भण्डारीका आफन्तले जानकारी दिएका छन्।
घ’टनाबारे अनुसन्धान भइरहेको र मृ’त्युको कारण पो’ष्टमार्टम रि’पोर्टपछि मात्रै खुल्ने जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा प्रहरी नायव उपरिक्षक दधिराम न्यौपानेले बताए। भण्डारी डडेल्धुरा कपडा बै’कंका अभियन्ता हुन।उनी डडेल्धुरामा विभिन्न समाजिक कार्यमा सं’लग्न थिए। त्यस्तै यता प्रहरीले होलीमा ज’बरजस्ती रंग द’लेर झ’गडा गरेको अ’भियोगमा ६५ जनालाई पक्राउ गरेको छ ।
महानगरीय प्रहरी परिसर, काठमाडौंले राजधानीका विभिन्न क्षेत्रबाट ७ जना युवतीसहित अन्यलाई सोमबार पक्राउ गरेको हो । काठमाडौं प्रहरीका डीएसपी होविन्द्र बोगटीका अनुसार पक्राउ पर्नेमा ब’लजफ्ती लो’ला हा’न्ने पनि छन् ।स’मूहमा झ’गडा ग’र्दागर्दै पनि केही पक्राउ परेका छन् । पक्राउ गरेको स्थानबाट नजिकै रहेको प्रहरी वृत्तमा उनीहरुलाई राखिएको छ ।